Ngwa teknụzụ Hi-Tech na Ule
Ogwe Production Line
Coils ogwe Monitoring
Auto-ịgbado ọkụ nke tube na efere
SPL na-emepụta ndị na-agbanwe ọkụ maka afọ 20. Anyị nwere n'ime ụlọ nnyocha na mmepe ike, nakwa dị ka ụlọ ọrụ-elu larịị na nhazi, okpomọkụ ọgwụgwọ, machining, nke anụ ahụ na chemical ule, àgwà akara ikike.
Emechara Ngwa Ule
Anyị guzosie ike na-ụlọ jụrụ ụlọ elu ule nyiwe, na dị iche iche iche iche nke tube na Shanghai. Na-arụkọ ọrụ na East China University of Science and Technology mahadum, anyị na-eme enterprise imekọ ihe ọnụ na-etinye ihe ndị kasị elu na nkà mmụta sayensị tiori ma anụ ụlọ na mbupụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ. Anyị na-anọgide na-eji usoro kachasị mma na ngwa ahịa kachasị mma na-eduzi ahịa ahịa. Anyị sonyeere isii gbara Shanghai mpaghara ọkọlọtọ na otu ụlọ ọrụ ọkọlọtọ.
Anyị na-ewu dị iche iche nke ule n'elu ikpo okwu maka Evaporative condensers, iji hụ na elu mma na elu arụmọrụ nke oku ngwaahịa.
Anyị raara onwe anyị nye iwu ụlọ ọrụ mbụ, mepụta ngwaahịa ndị mbụ. CTI (Jụrụ Technology Institute) si USA ichere anyị Jụrụ owlọ Elu kwa afọ, anyị ngwaahịa arụmọrụ na Quality Ọrụ na-eme ka anyị a na-eduga emeputa ke China.
Anyị ọma mepụtara mbụ set Nchikota ikuku oyi maka poli-sịlịkọn oru ngo emi odude ke akọrọ ebe-adịkarị mfe sandstorms na China nke awade mmiri na Energy ịzọpụta. Ihe eji emeputa uzo ikuku puru iche na egbochi ikuku na aja site na ikuku ya. Full ugboro akakabarede ofufe, oji ezi okpomọkụ akara, na ndị ọzọ Energy ịzọpụta. Mesikwuru akụrụngwa Ọdịdị, otu oge ulo oru mbo, ogologo ndụ, mechiri emechi mmiri nkesa usoro na nkà mmụta sayensị ịgba ngwaọrụ, mma na-azọpụta mmiri.
Ihe mbu nke ikuku nke China nke bu ihe jụrụ oyi na CNOOC.
China’s first sulfur dioxide condensation recovery plant project in China Nke mbụ bụ sọlfọ dioxide condensation recovery project na West Mining
Ihe mbu nke osisi nke mbu nke China na Xinfu Bio.
Super Galum Mgbidi
A na-eme shei ahụ nke nnukwu efere Aluzinc nke nwere mbibi na nrụgide siri ike nke dị 3-6 karịa karịa nke Aluzinc. Efere ndị ahụ nwere nguzogide okpomọkụ siri ike, na ọdịdị dị mma n'anya.
• 55% Aluminium—- Uru: Mgbochi ọkụ, ogologo ndụ.
• 43.4% Zinc—— Uru: Mgbapu nsị.
• 1.6% Silicon —- Uru: Okpomọkụ na-eguzogide.
Super Galum bụ aha aha maka 55% aluminum-zinc ntekwasa ígwè. Super Galum na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma na-eguzogide ọgwụ, na-ejikọta ihe onwunwe nke aluminom nke na-eme ka ogologo oge dị elu, nguzogide ọkụ dị mma, ọdịdị, na nke zinc nke na-enye nguzogide ọkụ dị elu na nchebe corrosion dị mma. Super Galum nwere okpukpu atọ na isii karịa ike na-eguzogide ọgwụ karịa akwa zinc na-efu ọnụ.
SPL si nanị condensing coils na-arụpụtara si elu àgwà ígwè tubing na-eso ndị kasị stringent àgwà akara usoro. A na-enyocha sekit ọ bụla iji mesie ihe kachasị mma.
All SPL coils na-etolite n'otu na-aga n'ihu ibe site na iji a pụrụ iche akpaka eriri igwe mmepụta akara, usoro a na-egbochi ịgbado ọkụ slag, enwekwu mmepụta arụmọrụ na factory ụzọ ugboro.
A na-anwale eriri igwe nke a na-anwale nke ugboro atọ n'oge usoro nrụpụta na nrụgide 2.5MPa iji hụ na ha anaghị efu.
Iji kpuchido eriri igwe ahụ maka nrụrụ, a na-etinye eriri igwe na ígwè siri ike wee tinye ọgbakọ ahụ dum na zinc a wụrụ awụ (kpoo ọkụ ọkụ) na 427oC, a na-etinye tubes na ntụzi nke mmiri iji nye ezigbo mmiri mmiri drainage.
SPL ọkọlọtọ coils na-enye ihe ndị kasị dị irè arụmọrụ nke okpomọkụ nyefe na eriri igwe technology na jupụta Nchikota izere akọrọ ntụpọ na unyi akpụ na coils.
A pụrụ ịdabere na Fixing Element
Oche nke BTC nakweere dichromat bolt iji jikọọ, inoxidability zuru oke karịa mkpọchi nkịtị, ugbu a ọ na-emesi obi ike na oyi na-arụ ọrụ ogologo oge.
Onye na-agba axial nke SPL edoghi eji nkpuru ahihia carbon karia ndi ozo, nke a na-enye, ikuku ikuku di elu, uzu olu, oru zuru oke na oru oma.
Patented Nogba nozulu
SPL'S nanị patented mmezi free ịgba nozulu-anọgide clog-free mgbe na-enye ọbụna na mgbe nile mmiri nkesa nke a pụrụ ịdabere na, ọnụ ọgụgụ-free evaporative jụrụ n'okpuru niile ọrụ ọnọdụ. Ọzọkwa, a na-etinye oghere ndị ahụ na ọkpọkọ mmiri na-ekesa na-enweghị mmiri ma nwee okpu njedebe.
Otu, ihe ndị a jikọtara ọnụ iji nye mkpuchi mkpuchi na enweghị atụ, nke na-eme ha ụlọ ọrụ kachasị mma na-arụ ọrụ na-enweghị mmebi, usoro nkesa na-enweghị mmiri.
Nnukwu arụmọrụ Siemens na-anya moto, na nnukwu ọnụọgụ na obere mkpọtụ. Ọ na-eji usoro na-enweghị nchịkwa na-egbochi akara akụrụngwa dị elu, na-enweghị onwe ya na ogologo ndụ.
Kọmputa De-N'ịcha Cleaner
Igwe eletriki de-scaling na-enye 98% mmụba nke ọma karịa mgbochi mmiri na ihe karịrị 95% mụbara nsị na algae na-ewepu teknụzụ elektrọniks dị elu. Ezubere karịsịa maka ụlọ elu ndị na-emechi emechi mechiri emechi na ndị na-ekpo ọkụ evaporative nwere ike oriri dị ala.
Patented PVC n'ụgbụgbọ mmanụ abụ Type Nri
SPL®jupụta imewe eji na S edoghi evaporative condenser na jụrụ ụlọ elu na-pụrụ iche iji mee ka jupụtara n'ọgba aghara inggwakọta nke ikuku na mmiri maka elu okpomọkụ nyefe. Ndụ mmiri pụrụ iche pụrụ iche na-ekwe ka ibu mmiri buru ibu na-enweghị oke nrụgide. Ejiri polyvinyl chloride na-adịghị arụ ọrụ, (PVC). Ọ gaghị ere ure ma ọ bụ mebie ma kee ya iji gbochie mmiri ọkụ nke 54.4ºC. N'ihi ogwe osisi pụrụ iche nke mmanụ a -ụ nke a na-ejikọta ibe akwụkwọ a kpụrụ akpụ, na nkwado dị ala nke ngalaba juputara, a na-emeziwanye usoro nhazi nke ihe jupụtara na ya, na-eme ka ihe jupụtara na ya bụrụ ihe eji arụ ọrụ. Ihe mejupụtara a họpụtara maka Condenser na Cooling Tower nwere àgwà ndị na-eguzogide ọkụ.
Honeydị n'ụgbụgbọ mmanụ a PVCụ nke PVC na mkpụmkpụ ikuku ikuku dị mkpirikpi nwere ike hụ na ikpo ọkụ ahụ dị jụụ ozugbo
Patenti Detachable Drift Eliminator
A na-eme SPL na-ewepu ikuku na-enweghị ike polyvylyl chloride (PVC) nke pụrụ iche, onye na-ewepụ ihe na-eme ihe kwekọrọ AS / NZS 3666.1: 20116 na oke nkwụsị nke 0.001%.
Eliminators na-Ezubere maka ịdị mfe nke mmezi-eme ka ha dị nnọọ mfe ọcha.
Basin mkpọda na-adaba adaba Cleanout
Ndagwurugwu ala bekee iji gbapụ ọkpọkọ nwere ike ịsachasị nsị mmiri na adịghị ọcha na-adaba adaba
Na abụọ ngafe louver sistemụ,a na-ejide ụmụ irighiri mmiri na nrịgo nke dị n'ime, na-ebelata nsogbu nkwụsị. Uche SPL pụrụ iche maka ụdị SPL niile N na-agbakwunye mpaghara bekee. A na-egbochi ìhè anyanwụ kpọmkwem n'ime mmiri dị n'ime condenser na ụlọ elu jụrụ oyi, si otú ahụ na-ebelata ikike nke algae guzobe. A na-ebelata ọgwụgwọ na mmezi mmiri nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ihe dị omimi nke na-eweghachi mmiri na igbochi ìhè anyanwụ, imewe ihe eji eme ihe nwere obere nsogbu dị ala. Obere nrụgide na-ebute ike oriri ike, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ nke ụlọ elu jụrụ oyi.
Advanced Elliptical eriri igwe
Ọhụrụ condensers evaporative ọhụrụ na-eji patli elliptical fin coils design nke na-emesi obi ike na arụmọrụ ka ukwuu. Ihe a na-emepụta elliptical tube na-enye ohere maka ịbịaru tube nso, na-ebute mpaghara dị elu karịa atụmatụ ọ bụla karịa atụmatụ eriri igwe. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe eji eme ihe na-eme ka nkà na ụzụ na-eji nkà na ụzụ na-arụ ọrụ nke ọma na-enwekwa nguzogide nke ikuku karịa atụmatụ ndị a na-emecha mma. Nke a na-enye ikike ibugo mmiri ka ukwuu, na-eme ka eriri igwe ọhụrụ ahụ bụrụ nke kacha mma na-arụ n'ahịa.
Akwadoro fordị Mbupu Mbupu
Ezubere ngwaahịa SPL ka ebunye ya n'ụdị kit dabara na ya.
Maintenances dị mfe
OEM & ODM Na-anabata
Ahaziri nha na shapes dị. Nabata ịkọrọ anyị echiche gị, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ kee ihe.